Shiinaha XY-5483P midab dahab ah Soo saarista Birta Birta Birta & Warshadda | Shuolong
XY-5483P midab dahab ah Birta Qaybiyaha Birta
Miisaanka: 5.6kgs / m2
Aagga Furitaanka: 27.3%
Mesh dhumucdiisuna: 3.3mm
Daaweynta Dusha sare: rinjiga
Dhererka ugu badan: 8m
SHUOLONG shaashadda mesh dhismaha & codsiyada kala qaybinta qolka waxay yareyneysaa dhalaalka boqollaal kala duwan, iyadoo kuxiran qaabka mesh loo xushay, aagagga sida joogtada ah loo deggan yahay ee dhismaha taasoo qayb ka ah iftiinka maalinta iyo aragtida dhibcaha. Codsiyada hooska gudaha ayaa sidoo kale badanaa labanlaabma daaweynta daaqada ama qaabab kale oo gaar ah oo naqshadeynta gudaha ah.
Waqtiga Hogaanka: 14-21 maalmood
Waa maxay's dheeraad ah, haddii aad u baahan tahay inaad ku darto waxyaabo naqshadeynta mesh birta ah mashaariicdaada socda ama soo socota, fadlan si toos ah noola soo xiriir. Marka lagu daro alaab tayo sare leh iyo qiimaha ugu fiican, waxaan sidoo kale bixin karnaa
Waxaan kuu soo bandhigi karnaa qalab ku habboon hadba baahida mashruucaaga. Hadday tahay tareen toosan ama tareen qalloocan oo qaloocsan, SHUOLONG ayaa kaa caawin kara inaad xaqiiqsato. Dhumucda qalabka aan ku siineyno waa ugu yaraan 2mm, nolosha adeegguna waa sii dheereysaa. Haddii aad wali su'aalo ka qabtid nidaamka rakibaadda, fadlan haka waaban inaad nala soo xiriirto, waxaan ku siin doonaa fiidiyoow rakib ah oo faahfaahsan si aad uga jawaabto shakigaaga.
1.Khibrad 40 Sano ah : In ka badan 40 sano waayo-aragnimo wax soo saarka mesh silig.
2.Dammaanad Tayo: Amarka kasta waxaa lagu tijaabiyaa oo lagu xakameeyaa si waafaqsan heerka ka sarreeya heerka caalamiga.
3.Adeeg gaar ah: Noocyada noo jira ka sokow, waxaan sidoo kale u habeyn karnaa baahiyahaaga naqshadeynta
4.Qiimaha ugu Fiican: Waxaan is waafajin doonaa muunad kasta ama wakiillada ay ku siiyaan shirkadaha kale. Si aan uga faa'iideysano ballanqaadkeenna qiimaha ayaa si fudud noogu soo dir oraah qoran shirkad kale waxaanna ku garaaci doonnaa sicirkooda ugu yaraan 10%
Haddii aad rabto inaad dhigto amarka ama aad u baahan tahay inaad ogaato faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan mesh birteenna ah, fadlan farriintaada ugu soo dir degelkeenna, na soo wac ama email noo soo dir. Waxaan kuugu soo jawaabi doonnaa 24 saacadood gudahood!
Hore: XY-5127 Mesh Architectural Mesh loogu talagalay Facade CLadding (1)
Xiga: XY-5483 Qaybta Birta Birta
Soosaarida Qalabka Mesh Architectual
Qaab dhismeedka mesh Mashiinka
Facade-xidhkii tolmo wanaagsan
Dhar bir ah oo loogu talagalay Dhismooyinka Fududyada
Dhar bir ah oo loogu talagalay Qeybta Booska
Dharka Dhuxusha Birta
XY-5875 Birta Mesh Shaashadda
XY-2510 Deco Birta Architectural mesh for qol ...
XY-8914G Qadiimiga naxaasta birta
XY-M3676 Qaybaha mesh birta
XY-2222 Birta Mesh Mashiinka loogu talagalay Shaashadda Qurxinta
XY-4135 Qurxinta Qalabka Mashiinka Birta